Nepal Auto | विश्वास नै हाम्रो सफलताको आधार
विश्वास नै हाम्रो सफलताको आधार6Bhadra, 2075
भेक्टन कस्तो प्रकारको इन्जिन आयल हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत ख्यातिप्राप्त भेक्टन विशेषत हेभी इक्विपमेन्ट र कमर्सियल सेगमेन्टका सवारीसाधनलाई लक्षित गरि ल्याइएको पछिल्लो ग्रेडको इन्जिन आयल हो । नेपालमा यसअघि यो सेगमेन्टमा सिएफ–फोर ग्रेडको इन्जिन आयल बढीमात्रामा प्रयोग हुन्थ्यो ।
ग्राहकलाई सुविधा होस् भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिआई फोर प्लस ग्रेड उपलव्ध गराएका छौ । लोडर, डोजरजस्ता हेभी इक्विपमेन्ट र डिजेलबाट चल्ने जुनसुकै कमर्सियल भेइकलमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । लोडर, डोजरजस्ता हाई पर्फमेन्स इक्विपमेन्टमा विशेष प्रकारको इन्जिन आयल चाहिने हुँदा त्यस्ता उपकरणका लागि भेक्टन एकदमै उपयोगी छ ।
यो इन्जिन आयल प्रयोग गर्दा हुने फाइदा के के हुन् ?
भेक्टनमा एकदमै नयाँ प्रविधि ‘सिस्टम फाइभ टेक्नोलोजी’ प्रयोग भएको छ । लुब्रिकेन्टले दिने फाइदा, यसले गर्ने काम, इन्जिनमा हुने खरावी र ती खरावीलाई कमी गर्न लुब्रिकेन्ट्सको कस्तो भुमिका हुन्छ ? भन्ने विषयमा गहन अध्ययनपछि यो प्रविधिको विकास गरिएको हो । जसका कारण यो इन्जिन आयलको प्रयोगले इन्धन खपत कम गराएर माइलेज बढाउँछ । इन्जिनको ओभरहल गर्ने समय लम्ब्याई दिन्छ ।
इन्जिनको पर्फमेन्स अन्य इन्जिन आयलको तुलनमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढाउँछ । छिटोछिटो इन्जिन आयल फेरिरहनु पर्दैन । सामन्यतया हेभी इक्विपमेन्ट चलाउँदा इन्धन खपत बढी हुने र त्यसमा पनि सस्तो र गुणस्तरहिन लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गर्दा माइलेज झनै घट्छ । यस्तो समस्याको उचित समाधान क्यास्ट्रोल भेक्टनले गर्छ ।
अहिले सवारीसाधन आयात गर्ने कम्पनीले आफ्नै जेन्युइन आयल समेत आयात गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ इन्जिन आयलले बजार लिन चुनौती छैन ?
विभिन्न व्यपारिक घरानाहरुले आफूमार्फत कारोबार हुने सवारीसाधनलाई लक्षित गरी विभिन्न ब्रान्डका इन्जिन आयल समेत आयात गरिरहेका छन् । उनीहरुले सर्भिस वारेन्टी र ग्यारेन्टीका कुरा गरेर आफूमार्फत कारोबार हुने लुब्रिकेन्ट्सको प्रयोग गर्न ग्राहकलाई बाध्य पारिरहेका छन् । जसका कारण वारेन्टी अवधिभर बाध्य भएरै धेरैजसोले अन्य ब्रान्डका इन्जिन आयल प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यो एकदमै गलत हो ।
आफूले चाहेको ब्रान्ड र गुणस्तरबाट विमुख गराएर आफ्नै ब्रान्ड लादनु भनेको ग्राहकलाई आफूले इच्छाएको वस्तु खरिद गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गराउनु सरह हो । यस विषयमा धेरैले बुझेका पनि छन् । तर वारेन्टी र ग्यारेन्टीका कारणले उम्कन सक्दैनन् ।
तर बजारमा थुप्रैले कम्पनीको प्रलोभनमा नपरी विश्वासका साथ क्यास्ट्रोल लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गरिरहेका उदाहरण छन् । विश्वकै उत्कृष्ट लुब्रिकेन्ट्स भएको हुँदा क्यास्ट्रोल लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गर्दा इन्जिनमा वारेन्टी र ग्यारेन्टीको सवाल नै आउँदैन । गुणस्तरमा संवेदनशील ग्राहकले क्यास्ट्रोल भेक्टन नै प्रयोग गर्छन् ।
प्रबन्धक, नेपाल ओभरसिज ट्रेडिङ कन्सर्न
अहिले कमर्सियल भेइकल्समा युरो फोर मापदण्डको कुरा आइरहेको छ । भेक्टनले यो मापदण्ड पूरा गर्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्पादन भेक्टनले यो मापदण्ड पूरा नगर्ने कुरै छैन । यो इन्जिन आयलमा ई–सेभेन प्रविधि प्रयोग भएको छ । जसका कारण युरो टु देखी फाइभ मापदण्डसम्मका सवारीसाधनमा ढुक्कसाथ प्रयोग गर्न सकिन्छ । युरो सिक्समा जाँदा भने अहिलेकोे प्रविधिमा केही फेरवदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले कुुन कुन इन्जिन निर्माता कम्पनीले भेक्टन प्रयोग गर्न सिफारिस गरेका छन् ?
विश्वका ठूला र प्रख्यात भनिएका प्रायः सवैजसो इन्जिन तथा सवारीसाधन उत्पादक कम्पनीले भेक्टन प्रयोग गर्न सिफारिस गरेका छन् । दर्जनौ ब्रान्डले भेक्टन प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको हुँदा ती सवैको नाम लिन सम्भव नहोला । नेपालको हकमा भन्नुपर्दा यहाँ भित्रिने प्राय सवैजसो हेभी इक्विपमेन्टमा भेक्टन प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै अन्य थुप्रै ब्रान्डका कमर्सियल भेइकल्समा पनि यसकै प्रयोग गर्न भनिएको छ ।
बजारको सुरुवाती प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
भेक्टन सार्वजनिक भएदेखि नै एकदमै सकरात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ । जसबाट हामी निकै उत्साहित छौ । निकै राम्रो अर्डर पनि आइरहेको छ । प्रयोग गरेको दिनदेखि नै यसको असली पर्फमेन्स थाहा हुने भएपनि यो इन्जिन आयलको समग्र मूल्यांकन एक दुई महिनामै गर्न सकिँदैन । कम्तीमा डेढ देखि दुई बर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र यसको बास्तविक पर्फमेन्स पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
मुल्य तथा अफरका बारेमा पनि बताइदिनुस न ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो इन्जिन आयलको मुल्य निकै महंगो पर्न जाने भएपनि हामीले नेपाली बजार सुहाउँदो दर उपलव्ध गराएका छौ । कम्पनीसँग अनुरोध गरेपछि यो सम्भव भएको हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा निकै सस्तोमा कारोबार गरिरहेका छौ ।
अफरको कुरा गर्दा कम्पनीको अनावश्यक शिर्षकमा हुने खर्चलाई कटाएर बेस्ट बाई अफर चलाएका छौ । जसअन्तर्गत १२ हजार रुपैयाँ पर्ने उत्पादनलाई ९ हजार १ सय ९९ रुपैयाँमै बेचिरहेका छौ । बिज्ञापन र स्किम/अफरमा हुने खर्चलाई काटेर मुल्य घटाएका हौं । यही कारण सस्तोमा ग्राहकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिन आयल प्रयोग गर्न पाएका छन् ।
भेक्टनजस्तो गुणस्तरिय इन्जिन आयल प्रयोग गर्दा हुने फाइदा के हुन् ?
हरेक कमर्सियल भेइकल्स भनेको एउटा पसलसरह हो । जसरी एउटा पसल २/४ दिन बन्द गर्दा व्यापारीलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ, त्यसैगरी करोडौ मूल्य तिरेर खरिद गरेको सवारीसाधनमा सस्तो र गुणस्तरहीन लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गरेकै कारण समस्या आएर गाडीलाई ग्यारेजमा थन्काउनु प¥यो भने त्यसले ठूलो क्षति पु¥याउँछ ।
हेभी इक्विपमेन्ट्समा त झन् १/२ घन्टामात्र मेसिन रोकियो भने पनि हजारौ रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । इन्जिन नै विग्रयो भने त त्यसको मर्मत सम्भारका लागि लाखौ रुपैयाँले पनि पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा इन्जिनको लाइफ लाइन मानिने इन्जिन आयल प्रयोगमा ग्राहकले लापारवाही गर्नु हुँदैन । महंगो मुल्य तिरेर खरिद गरेको गाडी र उपकरणको इन्जिन खराव हुनबाट जोगाउन र उच्च पर्फमेन्स लिन भेक्टन जत्तिकै गुणस्तरिय इन्जिन आयल प्रयोग गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।
क्यास्ट्रोलले लुब्रिकेन्ट्स बजारमा नेतृत्वदायी भूमिका पाउनुका कारण के हुन् ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै गुणस्तर हो । गुणस्तरमा सम्झौता नगरेकै कारण क्यास्ट्रोल सदावहार रुपमा उपभोक्ताको विश्वासिलो ब्रान्डका रुपमा दर्ज हुन सफल भएको छ । अर्को कुरा लुब्रिकेन्ट्समा जति पनि नयाँ प्रविधिका कुराहरु आउँछन्, कुनै न कुनै रुपमा उक्त प्रविधिमा क्यास्ट्रोलको नाम जोडिएर आएकै हुन्छ । यस्ता कारणले गर्दा नै क्यास्ट्रोलको लोकप्रियता नेपालमा मात्र होइन विश्वबजारमा समेत उच्च छ ।
नेपाली बजारमा हामीले यसको गुणस्तर कायम गर्दै प्रतिस्पर्धि मुल्यमा कारोवार गरिरहेका छौ । देशको जुनसुकै कुनामा पनि सहजै उपलव्ध हुने गरी बिक्री–वितरणको सञ्जाल विस्तार गरेका छौ । अनुचित तवरबाट कारोबार गरेर विक्रेता र उपभोक्तालाई अनावश्यक प्रलोभनमा पार्नेजस्ता काम हामीले कहिल्यै गरेनौ र गर्दैनौ ।
हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौ । स्किम र अफरको पछाडि कहिल्यै लाग्दैनौ । यही भएर हामी विक्रेता, मेकानिक्स र उपभोक्ताको विश्वास जित्न सफल भएका छौ । क्यास्ट्रोल प्रयोग गरेपछि गाडीको इन्जिन बलियो र मजवुत हुन्छ भन्ने ग्राहकको विश्वासका कारण हामी आज लुब्रिकेन्ट्स बजारमा नम्वर वानमा छौ ।
दीपकराज गिरी भन्छन् - ब्रान्डप्रतिको विश्वसनियताका कारण जेसीबी नम्वर वान
दुई पांग्रे मात्र होइन, अब चार पांग्रे र छ पांग्रेमा समेत हाम्रो उपस्थिति
सानीका वारेमा शाक्यको भनाइ : मूल्यका हिसाबले सानी किफायती छ